Saron-doko Indiana "Voninkazo mavokely" - Moi Mili
Home > Lohan'ilay Indiana "Powder mavokely"
Lohan'ilay Indiana "Powder mavokely"
Ny tarika Indiana tany am-boalohany antsoina hoe Moimili "Mofomamy mavokely" dia firavaka izay hanome aingam-panahy ny tovovavy iray. Atao tsara ny lamba voajanahary. Manana modely goavam-be mahafinaritra. Hampiasaina amin'ny fahafinaretana, amin'ny fety amin'ny akanjo fikaon-doha na ho toy ny bika amin'ny fampisehoana an-tsekoly.
Fitaovana: landihazo, malefaka